Masinina fanamarihana lasantsy laser
Milina fanamarihana laser feno
Masinina fanamarihana laser nameplate
Masinina fanamarihana laser amin'ny faritra midadasika
Sombin-tsarimihetsika IC manisy marika an'ny Visual Visual System
avy amin'ny admin tamin'ny 21-04-06
Ny chip dia mpitatitra boribory miharo, izay mizara wafer maromaro, ary teny ankapobeny ho an'ny singa semiconductor. Ny chip IC dia afaka mampifangaro singa elektronika isan-karazany amin'ny takelaka silicone mba hamorona faritra, ...
Fitaovana Laser Code VIN ho an'ny indostrian'ny fiara misy kodiarana roa
Miaraka amin'ny fitomboan'ny isan'ny fiara tsy mitsaha-mitombo eto amintsika, ny olana momba ny fahalotoan'ny tontolo iainana ateraky ny fanararaotan'ny fiara dia nanjary lehibe kokoa. Araka izany, ny governemanta dia manentana amin'ny fomba mavitrika ny fomba maitso handehanana ...
Teknolojia manohitra ny fanaovana hosoka amin'ny laser ho an'ny sarontava
Hatramin'ny nipoahan'ny COVID-19, ny sarontava dia nanjary filàna isan'andro ho an'ny olona tsirairay. Saingy, ny elanelana misy eo amin'ny fangatahana dia nahatonga ireo mpivarotra tsy ara-dalàna sasany nanararaotra an'io, ary sarontava saron-tava ambany kalitao marobe no niditra an-tsena. Teny mifandraika amin'ny "sarontava sandoka ...
Chips IC manamarika ny CCD Visual S ...
VIN Code Laser fitaovana ho an'ny roa ...
Laser manohitra ny fanaovana hosoka amin'ny teknolojia ...
2F, No.20 tranobe, No.33 Zhihui Road, Distrikan'i Huishan, Wuxi, Jiangsu, Sina
7 Andro isan-kerinandro manomboka amin'ny 08:30 maraina ka hatramin'ny 5:30 hariva
Raha tsy misy izany, dia afaka mifehy ny elit, ary ny fotoana maharitra